Fadhi Nooma Yaalo, Furiinka Mujtamaceena oo Faraha Ka Batay. | Raaxada guurka
Fadhi Nooma Yaalo, Furiinka Mujtamaceena oo Faraha Ka Batay.
, Nolosha bulshada
» Fadhi Nooma Yaalo, Furiinka Mujtamaceena oo Faraha Ka Batay.
Waa adag tahay in la helo guri Soomaaliyeed oo ay taaban dhibaatada furiinka. Haduu qofka si toos ah aanu taaban, waxay taabatay qaraabadiisa, jiiraanka ama saaxiibkii. Waxaa kaloo ayaan daro ah in badanaaba kuwii is furay ay ka shalaayeen furiinkoodi oo ay cadaynayaan inay ku degdegeen oo aanay waqti siinin. Waxaad arkaysaa in qofkii furiinka ku degdegay oo raadinaya Caalim qiil u helo sidii u soo ceshodo xaaskiisa. Dhibaatada ugu weyn oo jiraa waxay tahay, dhalinyarada soomaaliyeed oo badanaa aqal gala iyagoo cilimi u lahayn xilka, xuquuqda iyo waajabaadka saaran. Runtii, waxaan aad ugu baahanahay in dhalinyarada intayan aqal galin loo sameeyo barnaamijyo lagu barayo xilka iyo waajibaadka saaran si loo horumariyo xiriirka labada qof oo aqal galaya loona helo “Al Mawaddah”.
Furiinka arin sahlan ma aha, taasna waxaa cadayn u ah, Suurada (Al-Dhalaaq) ee qur’aankeena kariimka ah waa suurada ugu badan kalimada (Alle Ka Baqa- Ittaqullaah). Ibliisna (cadowgeena ugu weynaa) wuu ogaaday sida kala gaynta labada is qaba ay mujtamaca u burburinayso. Taasna nabigeena suubanaa ayaa nooga digay Xadiiska Jabir (Imam Muslim, no:5032) wuxuu sheegayaa in Ibliis carshigiisa dhigay bada dhexdiisa uuna ciidankiisa meesha ka dira siday u lumiyaan dadka. Midka ugu darajada sareeyaana oo Ibliis aad uso dhowaysto waa kan ku guulaysta inuu nin iyo xaaskiisa kala geeyo.
Hadaba tan micnaheeda ma aha in furiinkoo dhan uu xun yahay ama aysan banaanayn. Dabcan waa jiraa furiin lagu najaxay (uu dhibka aad u badnaa) oo labada kala tagtay iyo caruurtooda ku nasteen. Waxaa la diidayaa furiinka lagu degdegaayo ayadoo xal la heli karo, badanaana furiinka mujtamaceena kuwaasaa ugu badan. Hadaba hadii soo koobno furiinka mujtamaca waxay u saamaysaa sida soo socota:
Reerihii labada qofood ay ka dhasheen iyo asxaabtooda ayaa colooba gaar ahaan haduu furiinka uu ahaa mid aargoosi ah oo aan lagu dhameyn si nabad ku jirta. Tanina waxay usii kordhisaa xanuunka labada qofood is furay. Caruurta qaarkii waxaa dhacda in isbedelka weyn reerkooda ku dhacay, ciilkii iyo calool xumada dartii in ay aadaabtooda is bedesho oo ay kacaan dambiyo kala duwan taasoo suura galinaysa in xabsiga loo taxaabo. Waxbarashada caruurta oo hoos u dhaca. Caruur badan oo rikoorkooda waxbarashada ahaa mid aad u sareeyaa furiinka ka hor ayaa markiiba hoos u dhaca murugada dartiisa. Waxaa kaloo jirta caruurta arkay furitaanka waalidiintooda waxay saameyn ku yeelanee mustaqbalka guurkooda dambe. Cilmi baaris lugu sameeyay caruur fara badan oo waalidiintooda kala tageen ayaan waxay tustay in dhibaatooyin ay kala kulmeen guurkooda uuna furiinkooda badnaa. Labada qofood ee kala tagay, furiinka ka bacdi saameyn weyn ayay ku yeelataa noloshooda cusub. Fikirkooda iyo murugadooda wuu bataa oo waqti ayay ku qaadataa intay noloshooda caadi ku soo noqonayso. Anagana waa nagu waajib inaanu caawino oo aanu daryeelno inta ay ka soo kabsadaan. Sida aan u yarayn lahayn furiinka micnadarada laysku furaayo ayadoo xal la heli karo waa mas’uul anogoo dhan na wada saaran. Qof walbo ha ahaado Lamaanayaasha, Waalidiinta, Saxiibada, Jiiraanka,ugaasyada, Jaaliyadaha dibada ee soomaaliyeed, dawlada iyo hay’adaha warfaafinta ay soomaalidu leedahay sida TVga, wargeysyada iyo Websiteyada IWM, haday cid kasta doorkeeda ka ciyaarto ka hortaga dhibaatadani, waxaa hubaal ah in aan guul ka gaari doono. Ilaahayna qowmku ma bedelo ilaa ay ayaga iska bedelaan, Ugu dambayntii, waxaan hoos ku soo koobaynaa talooyin lagu xalin karo mashaakilaadka ina haysta. (Fadlan akhristayaasha, idinkana talooyinkiina hoos ku qora):
Lamaanayaasha iyo Reerkooda
Aqri oo faham xilka iyo waajibaadka ku saaran. Inta aadan guursan ka hor waxaa haboon inaad ogaato mas’uuliyada ku saaran, markaad guursatidna wali aqriska iyo barashada waa furan tahay. Warbixin badan oo ku saabsan arimaha guurka ayaa jira sida muxaadarooyinka (YouTube), buugaag iyo Websiteyada oo aad ka helaysid maqaalo soomaaliyeed. Ogow in mashaakilaadka guurka uu qof walbo taabto oo aan kaligaa ahayn. Xitaa nabigeena suubanaa ayay taabatay markii xaaskiisa uu ugu jeclaa Caa’isha lugu been abuurtay ilaa ilaahay qur’aankiisa kasoo dajiyo uu ku bari yeelay caa’isha. Waxaa muhim ah kaliya in aad si wanaagsan u wajahdo dhibka jira. Waalidiinta: Fadlan markaad caruurtiina dhex joogtaan tusa oo ha arkaan ixtiraamka iyo kalgacaylka adiga iyo xaaskaga idinka dhexeeyo. Tani waa waxbarashada ugu fiican oo saamayn fiican ku yeelanayso caruurtaada markay weynaadaan oo ay guursadaan. 4. Labada qofood oo kala tagay: Runtii ma sahlana kasoo kabsashada amarka dhacay, qalbiga kheyr u sheega. Iska cafi ninkaada ama naagtaada hore iyo waxaa ka sii muhiimsan inaad qalbiga raacraacin oo aad adiga laftaada iyo dad kaleba eedin. Markaa xanaaqsan tahayna, ninkaaga ama naagtaada hore haku ceyin oo ha ku lacnadin caruurta hortooda oo saameyn xun ayay ku yeelataa caruurta. Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Dibada:
1. Qabanqaabiya barnaamijyo lugu barayo dhalinyarada guursanaysa rag iyo dumarba xilka iyo waajibaadka saaran qof walba iyo siday u wada hadli lahaayeen haduu dhibaato soo foodsaaro. Si ayan ugu baahanba inuu dad kale soo dhex galo. 2. Sameeya koox khibrad u leh habka wax loo maslaxeeyo oo ka hawl gala maslaxaynta labada qof ee khilaaf dhexdooda jira. Iyo in la caawiyo labada kala tagay oo calafkoodi dhamaaday inta ay noloshooda caadi ugu soo noqonayso. Dawladda Soomaaliyeed Ku dara Sanadka ugu dambeeya dugsiga sare Maadada diinta qeyb lugu barayo aadaabta guurka iyo waajibaadkiisa. Ka dhiga sharci ahaan mid khasab ku ah in labada qof is guursanayo ay ka qayb galaan barnaamijyada lugu barayo akhlaaqiyaadka guurka. Dawlada Malaysia ayaa arintani dhaqan gelisay, kuna guuleysatay in ay yareyso furiinka badnaa ka jiray wadankooda. Hay’adaha Warfaafinta Soomalidu Leedahay (TVga, Raadiyaha, Wargeyska IWM)
1. Mar walba ku dara barnaamijyo iyo maqaalo ka hadlaya guurka si shacabka aqoontooda loo kordhiyo. Ogowna barnaamijyadan oo kale baahi ayay shacabka u qabaan oo waxay badinaysaa akhristayaasha, dhagaystayaasha iyo daawadayaashiina. Ilaahayna ajar wuu idinka siinayaa. 2. Waxa haboon, In barnaamiyada iyo maqaalada uu ahaadaa mid miisaaman oo dhexdhexaad (Wasadhiya) raacayana akhlaaqda laga soo guuriyay Nabigeena suubanaa. Qof lagu daysadaa oo asaga ka fiican ma jiro AWC. Walaalayaal, hadii aan qoray wax khalad ah la socda waxay ka timid nafsadayda daciifka ah iyo shaydaanka. Wixii sax ahna ilaahay xagii ayay ka timid asagaana mahad is ka leh.
Bazi Bussuri Sheekh
Anonymous8/12/2012Asc, aniga waxaan kamid ahay dadka uu ku habsaday qadarta kalatagida waxaan dhalay caruur badan waxaan garoob ahaa 5sano waxaan aad oga taxadari jiray inaan guursado qofaan isfahmi karin waxa kaliyee iga maqan waxuu ahaa ee aan kudooran lahaa inuu noqdo qof jaceylka aaminsan. Aktiisana kuweyn yahay aana is fahmi karno. Majecli oo waan kanaxaa wadadaan maray iney maraan walaaladeyda soomaaliyeed, waxaana rajeynaa inaan talobixinta kaqeyb qaadan karo maadaama aan qibrad buuxda kadhaxhelay guurkeyga iyo kalatagiiba,RDmrReplyDeleteAnonymous8/13/2012asc aniga waxaan ahay wiil 22 jir ah kuna nool qurbaha waxana keygu daray gabar joogto somalia gaar ahaan baadiyaha weligeyna ma arkin ma aqaan side tahay dabeecadeda waxaana ka wal wal-sanahay mustaqbal keyga meesha uu ku danbey doono QOLADA RG plz fikrad iga siiya ?? ReplyDeleteDW8/14/2012Asc wr@RDmrWelcome back qaali. Waa lagu waayey ee mar kale ku soo dhawow RG. Nooga faaiidee khibradahaaga waanu baahannahee.DWReplyDeleteAnonymous8/14/2012Wcs DW walaalkey. Waann dhowahay waxaana rajeynaa inaan soo booqan doono si toosa bogan loo bogay ee RG. ReplyDeleteAdd commentLoad more...